bhimphoto: घरभित्र अजिंगर भेटिदा
आज चार जनाको टोली थियो, स्नातकोतर क्याम्पसका सरहरु डा. भरतराज सुब्वा, केपी लिम्बू , फोटोपत्रकार मित्र यात्रा थुलुङ र म । हामी सुनसरीको भासि गाविसमा पर्ने झुम्काबाट उतर सिंगियाको लालपुर, मानपुर र रामधुनी हुदै प्रकाशपुर पुग्यौ । त्यहाँ हामी भुँडीफोर गरुड भनिने लेसर एडजुटेन्ट स्टोर्कको गुँडको खोजीमा पुगेका थियौ । बाटो देखेकालाइ सोध्दै जाने सल्लाहमा हामी स्थानीय रविन घिमिरेको घर पुग्यौ ।
रविन दाइ भेटिनुभएन । भाउनुले सुनाउनुभयो त्यहाँ दाहाल थरमा गाउँलेको घरमा अजिंगर निस्किएछ अनि दाइ त्यतै । हामी पनि खोज्दै गयौं । मेला लागेजस्तो बाटैबाट ठूलो भीड थियो । भर्खरै त्यहाँ स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको बसे क्यापका एक जना जवान भीड नियन्त्रण गर्दै थिए । भित्र छिरियो । कोशीटप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सो गाउँको ६ न. वडाका मदन दाहालको घरमा तौलिया बोकेर कोठाभित्र खेदाखेद थियो ।
एकैछिनमा खेदाखेद सकियो । आरक्षका कर्मचारीले बाहिर ल्याए अजिंगर । सात फिट लम्बाइको इण्डियन रक पाइथन भनिने सो अजिंगर करीव एक वर्षको हुनुपर्ने अडकल काटियो । उनीहरुले बोरामा हाले र लगे । सिनेमा सकियो ।
टप्पु क्षेत्रमा अजिंगर भेटिनु नौलो थिएन । तर, दाहाल परिवारले काठे घरको चोटामा विहान देखेको अजिंगर दिउँसो भुँइमा झरेपछिमात्र पकडमा आएको थियो । रबिन दाइने सोधे समाचार के गर्ने । मैले हाम्रा जिल्ला संवाददातालाइ भनिदिनोस , फोटो चाहि म पुगेर मेल गरौला भने । अजिंगरको प्रसंग सकिएपछि हामी आएको उदेशयमा लाग्यौ । त्यस क्षेत्रमा कोशी वारी गुँड रहेनछन् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:07 PM